Isikhwama Sokutshalwa Kwezakhiwo Zentengiso | Isikhwama Somhlaba Ogcwele Izakhiwo - iREICG
Tshala imali manje
Ukutshalwa Kwezakhiwo Kwangempela Kwenziwe kabushaSM
Isikhwama Sokutshalwa Kwezakhiwo SaseMelika SaseMelika
Kwabatshalizimali Bomhlaba Wonke
Funda Kuqhubeke ...
Ukwamukela abatshali bezimali okungebona abaseMelika MAY 1
Ifilosofi yethu yokutshala izimali ilingisa imodeli kaWarren Buffet,
"Isikhathi sethu sokubamba esiyintandokazi ingunaphakade".
Sithenga izindlu ezithengiswayo futhi sibamba… ingunaphakade! Yonke imali engenayo yokuqasha izophinde itshalwe ukuze kuthengwe izakhiwo ezengeziwe zokuthengisa, kukhule inani le- isikhwama sokutshala imali ngokucacile.
Sithenga izindlu ezithengiswayo futhi sibamba… ingunaphakade! Yonke imali engenayo yokuqasha izophinde itshalwe ukuze kuthengwe izakhiwo ezengeziwe zokuthengisa, kukhulise inani lesikhwama kakhulu.
Sihluke Kanjani ISikhwama Sezakhiwo Zezentengiselwano seReICG?
Izimali eziningi zokutshalwa kwezindlu zisabalalisa imbuyiselo ngenye yezindlela ezimbili, kungaba ngokuhambisa / izinzuzo noma ngokuqedwa kwempahla engaphansi.
I-REICG ivuselela ukugeleza kwemali okukhiqizwe ekutholakaleni kwethu kwezezakhiwo kuya ekuthengeni ezinye izakhiwo. Le ndlela yokutshala imali ikhulisa ukuhamba kwemali okuphelele kwesiKhwama, okuvumela isiKhwama ukuthi sikwazi ukuthenga izakhiwo eziningi, sikhulise iphothifoliyo kakhulu. I-REICG ingumkhiqizo wokutshala imali wesikhathi eside okhulisa imali yabatshalizimali ngokwazisa inani lesiKhwama.
Ukutshalwa kwezimali okuningi kwezezakhiwo kungokwesikhathi eside emvelweni okunemali enganiselwe, kepha i-REICG isungule imoto yemali evumela abatshalizimali ukuthi baqede amasheya abo kumugqa wesikhathi wabo.
Faka Imali Ku-Real Estate njengemindeni ecebile kakhulu emhlabeni.
I-1% ephezulu ikhulise umcebo wayo ngezindawo ezithengiswayo ezizukulwaneni ngezizukulwane. Baye bakwazi ukufinyelela kuphela ukuthenga ibanga lokutshala imali, indawo ethengiswayo, futhi ubambe lezi zimpahla isikhathi eside.
Bavuselela iningi lemali engenayo yokuqasha ibe yizakhiwo ezengeziwe futhi bakhulise ingcebo yabo ngokukhulu.
Funda ukuthi isebenza kanjani
I-1% ephezulu ikhulise umcebo wayo ngezindawo ezithengiswayo ezizukulwaneni ngezizukulwane. Banokufinyelela okukhethekile kokuthenga ibanga lotshalo-mali, izindlu ezithengiswayo, futhi babambe lezi zimpahla isikhathi eside.
EStamford, CT 06905 USA
IMon-Fri: 9:00 am - 5:00 pm EDT
Noma ngubani angaba ngumtshalizimali wezindawo zomhlaba wonke, ngaphandle kokutshalwa kwezimali okukhulu noma isipiliyoni sangaphambilini.
© 2021 REI Capital Growth, LLC | Wonke Amalungelo Agodliwe.
I-REI Capital Management (REICM) isebenza iwebhusayithi ku-reicapitalgrowth.com ("Isiza"). Ngokusebenzisa iSayithi, wamukela Imigomo yethu Yesevisi kanye Nenqubomgomo Yobumfihlo. AKUKHO MALI NOMA OKUNYE UKUCATSHANGELWA KUXAZULULWA, FUTHI UMA UTHUNYELWA NGOKUPHENDULA, NGEKE SAMUKELWE.Isikhombisi SESITHAKAZELO ASIHLANGANISI ISIBOPHO NOMA UKUZINIKELA KWANOMA YILUPHI UHLELO, AKUKHO MTHETHO WOKUTHENGA IZIPHEPHO ONGAMUKELEKA FUTHI AKUKHO INGXENYE YENTENGO YOKUTHENGA ENGATHOLAKALA KUZE KUFIKE ISITATIMENDE SOKUNIKEZELWA ESIHLALELWA YINKAMPANI NABASEBENZI. UKUFANELEKELWA ISEKHODI. NOMA YINI UMNIKELO ONjalo UNGASULEKA NOMA UPHENDUKE, NGAPHANDLE KWESIBOPHO NOMA UKUZIBOPHELA KWANOMA YILUPHI UHLOBO, NGANOMA NGASIPHI ISIKHATHI NGAPHAMBI KOKWAZISWA KOKWAMUKELWA OKUNIKEZWA EMVA KOSUKU LOKUFANELEKA.
Konke ukuphepha kubandakanya ubungozi futhi kungaholela ekulahlekelweni okuyingxenye noma okuphelele. Thina, esibhekise ku-REICG nakuzo zonke izinxusa ze-REICG, asinikezi izeluleko zentela noma izincomo zokutshalwa kwezimali. Ayikho imiphumela echazwe lapha noma kwenye indawo kuleli Sayithi eqinisekile futhi ayiqinisekisiwe ukuthi izophumela ekutshalweni okuthile noma ngomphumela wentela. Abatshalizimali abalindelekile kufanele babonisane nabeluleki babo bentela maqondana nemiphumela yentela ngokuya ngezimo zabo ezithile. Ayikho i-REICM nanoma iyiphi inxusa layo ethwala umthwalo wemiphumela yentela noma imiphumela yokutshalwa kwezimali ezinhlelweni zanoma yimuphi umtshali-zimali otshala imali ekunikelweni okuxhaswe yi-REICM. Imiyalezo ekule webhusayithi ayisona isiphakamiso sokuthengisa noma ukucela intshisekelo kunoma yikuphi ukuphepha. Asenzi sicelo ngaphandle kokunikela ngemibhalo yethu esemthethweni efana nememorandamu yokubekwa ngasese noma i-prospectus. Le mibhalo enikezwayo ingatholwa kuphela ngokusebenzisa ingosi yethu yokubuyiselwa kwemali yabantu abaningi ethi "Faka imali manje."